China American Standard Banded Malleable Iron Pipe Fittings စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Donghuan
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ Donghuan သည် SDH အမေရိကန်စံနှုန်းဖြင့် သွပ်ရည်စိမ်ပြီး အနက်ရောင်ပျော့ပြောင်းနိုင်သော သံပိုက်ဆက်ကြောင်းများကို ထုတ်လုပ်ရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် IS0 9001: 2008 နှင့် ကိုက်ညီသော အရည်အသွေးစနစ်ကို တည်ထောင်ထားပြီး Canada တွင် CRN ၏ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ဥရောပနိုင်ငံများ၏ CE နှင့် TSE ၏ တူရကီနိုင်ငံတို့ဖြစ်သည်။
နှစ်စဉ်ထွက်ရှိမှု 4000 mts ဖြင့် 1986 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်း 280 ဖြင့် ကျော်ကြားသောဖောက်သည်များစွာကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်၏ပုံများ သို့မဟုတ် နမူနာများအလိုက် ဥရောပနှင့် အမေရိကန် အမျိုးအစားတွဲချိတ်များ၊ ကွပ်များနှင့် အခြားသွန်းအစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။
1.Malleable သံပိုက်တပ်ဆင်ပစ္စည်းများ၊BS၊HOT DIPPED သွပ်ရည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊
2.FOB TIANJIN ဆိပ်ကမ်း၊ တရုတ်;
3. USD ဖြင့် ဖော်ပြထားသော စျေးနှုန်းများ ၊
4. ပုံးပုံးများထဲသို့ထုပ်ပိုးပြီးနောက် pallets ပေါ်တွင်;
5. သတ်မှတ်ချက်များငွေပေးချေမှု: 30% ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု 70% တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ;
6.Delivery အချိန်: T/T 30% ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် 45 ရက်;
7.Period of validity of the price: 10 ရက်။
ယခင်- အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး Stainless Steel Camlock - Explosin-proog Pipe Unions - Donghuan
Hinged Pipe Clamp, ဝက်အူဖြင့်ပိုက်ကလစ်, အလူမီနီယမ်ပိုက် တပ်ဆင်မှုများ, American Standard Fittings များ, Hose With Coupling, လျောက်ပတ်တယ်။,